Goorta la Codsanayo Talooyinka Google Ads (ama maya) | BehMaster
Bogga ugu weyn/E-commerce/Goorta la Dalbo Talooyinka Google Ads (ama Aan ahayn)
Goorta la Dalbo Talooyinka Google Ads (ama Aan ahayn)
Shaqada khabiirka ku-takhasusay-riix-guji waxay umuuqataa inaysan waligeed dhamaystirnayn - wanaajin badan ayaa had iyo jeer suurtagal ah. Xayeysiiska Google wuxuu bixiyaa tab talobixineed si uu u caawiyo. Kuwaas waxaa ka mid ah isbeddelada qaybaha koontada asaasiga ah, sida:
Nuqul xayeysiis ah,
Talooyinka Google marwalba isma waafaqsana yoolalka xayeysiistayaasha khibradeyda. Talooyinku ma damaanad qaadayaan waxqabad horumarineed.
Shayga ugu horreeya ee lagu ogaado talooyinka talooyinka waa "Dhibcahaaga wax-u-qabadka." Waa qiyaasta Google ee koontada. Dhibcaha sare, ayaa ka sii fiican.
“Dhibcahaaga is-hagaajinta” ayaa ah qiyaasta Google ee ku aaddan suurtagalnimada koontada. Dhibcaha sare, ayaa ka sii fiican.
Dhibcaha fiicnaanta ayaa sii kordheysa markii talo la fuliyo. Tusaale ahaan, dhibcaha ayaa kor u kici doona marka miisaaniyadda aan la isticmaalin ee hal olole loo wareejiyo mid kale oo leh xaddidan xadidan. Mar labaad, dhibco sare ma xaqiijinayso waxqabad wanaagsan.
Google wuxuu bixiyaa ku dhawaad ​​100 nooc oo talooyin ah. Dhammaantood halkan kuma wada hadli doono. Taa beddelkeeda, waxaan wax ka qaban doonaa kuwa saamaynta ugu badan leh.
Xayeysiiska iyo kordhinta
Talada ugu caansan ee Google waa in la abuuro xayeysiis raadin jawaab leh oo ku jirta koox kasta oo xayeysiis ah.
Ku darista xayeysiiska raadinta jawaabta ah waa talo soo jeedinta ugu badan ee Google.
RSAs waa nooca xayeysiiska qoraalka cusub ee Google. Waa sii wadida dadaalka Google ee ah in uu otomaatig u noqdo hawlaha xayaysiiska. Xayeysiyeyaashu waxay soo gudbiyaan ilaa 15 ciwaanno iyo afar khadadka sharraxaadda. Google ayaa markaa beddelmi doonta si ay u go'aamiso isku-darka soo saaraya heerka ugu sarreeya ee gujis-ku-gudbinta. Xayeysiyeyaashu way codsan karaan, wax ka beddeli karaan, ama iska indhatirin karaan soo jeedintaas.
Si kastaba ha noqotee, xayeysiiyayaashu waa inay ku daraan ugu yaraan hal RSA koox kasta oo xayeysiis ah, iyadoon loo eegin talada Google. RSAs waxay u badan tahay inay ku muujiyaan liiska xayeysiiska in xayeysiisyada qoraalka ee caadiga ahi aysan sameynin.
Talooyinka kale ee nuqulka xayeysiiska ee Google waxaa ka mid ah kordhin iyo tijaabin. Google waxay kugula talin doontaa xulashooyinka kordhinta, sida fadhiyada, haddii olole uusan lahayn. Dhammaan ololayaasha waa inay ku jiraan kordhin kasta oo khuseysa.
Imtixaan ahaan, Google wuxuu dib u eegi doonaa xayeysiiska leh farriimo isku mid ah koontada (yacni, “diritaanka bilaashka ah”) wuxuuna kugula talin doonaa tijaabada nuqul kale ama xayeysiis.
Google waxa ay riixaysay ololayaasha casriga ah - Bandhigga iyo wax iibsiga. Laakiin kaliya xayeysiiyeyaasha khibradda leh waa inay tijaabiyaan, aragtidayda, ugu yaraan si ballaaran. Ololayaasha casriga ahi waxay ku meeleeyaan inta badan kantaroolka Google oo leh wax yar oo xayeysiiye ah.
Tartanka iyo miisaaniyadaha
Ka digtoonow marka Google kugula taliyo kororka miisaaniyadda. Google wuxuu diirada saaraa ololayaasha miisaaniyadaha xadidan ama kordhinta taraafikada waxayna muujineysaa isbeddelka la filayo ee isbeddelada (laga bilaabo kharashka xayeysiinta sare) iyo qiimaha beddelaadda.
Google sidoo kale waxay aqoonsan doontaa ololayaasha miisaaniyada xad-dhaafka ah, si loogu wareejiyo.
Talooyinka qandaraaska iyo miisaaniyada Google waxay diirada saarayaan ololeyaasha qarashka xadidan ama kordhinta taraafikada.
U guurista ololayaasha tartanka si toos ah waa talo aan taageerayo maadaama ay istaraatijiyadani hadda aad la isku halayn karo marka loo eego waagii hore. Google waxa ay soo jeedin doontaa ikhtiyaarka tartan toos ah (ie, Bartilmaameedka CPA) iyo bartilmaameedka (ie, $30). Xayeysiyeyaashu waxay go'aansan karaan inay qaataan talooyinkaas iyo in kale.
Erayo fure iyo bartilmaameed
Qaybtani waxay u muuqataa inay tahay tan ugu waxtarka badan maadaama talooyinka ay yihiin kuwo aad u dhowrsan. Badanaa waxay yihiin talooyin ku saabsan ilaalinta guriga, sida ereyada muhiimka ah ee laga saaro koontadaada sababtoo ah ma aysan helin taraafiko ama wey badnaan karaan.
Talooyinka kale waxaa ka mid ah joojinta ereyada muhiimka ah ee liita iyo ka saarista ama ku darista ereyada muhiimka ah.
Google waxay sidoo kale kugula talin kartaa ereyada muhiimka ah ee cusub (iyo qiyaastooda raadinta toddobaadlaha ah) ee loogu talagalay kooxaha xayeysiinta ee jira iyo sidoo kale dhagaystayaasha cusub ee ololayaasha. Tusaalooyinka dhagaystayaasha waxaa ka mid ah:
Suuqa dib u iibinta
Isticmaalayaal la mid ah,
Dhammaan ereyada la soo jeediyey iyo dhagaystayaashu maaha kuwo macno u samaynaya xayeysiiya kasta. Ujeeddadu waxay tahay in la soo jeediyo siyaabo lagu yareeyo qarashka xayeysiiska ee khasaaray iyo haddii kale laga caawiyo hubinta ujeedka raadinta inuu la mid noqdo xayeysiiska.
Talooyinka "Dayactirka" waxaa loogu talagalay in lagu saxo khaladaadka koontada, sida kooxaha xayeysiiska ah oo aan lahayn ereyada muhiimka ah ama xayeysiiska, ama waxyaabaha aan la oggolaan ee ku jira quudintaada.
Sida shabakadaha bulshadu u kaxeeyaan balaayiin booqashooyin raadin ah SEO
8 Waxyaabaha Muhiimka ah ee Macaamiisha